အကြံပြုပါမည် — MYSTERY ZILLION
June 2007 edited June 2008 in Idea
ဖိုရမ်ထဲ၀င်ပြီးရင် ရောက်ရာနေရာက ပြန်ထွက်နိုင်ဖို့ Log out ကိုရှာမရလို့ဗျ :106: ... မပါတာပဲလား၊ မတွေ့တာပဲလားတော့ မသိဘူး။ ထည့်လို့ရရင်ထည့်ပေးစေလိုပါတယ်ဗျာ.....
How about to add video and audio editing related fields in your forum?
forum ရဲ့ home page အောက်ဆုံးနားမှာ ရှိပါတယ်..
ဆွေးနွေးဖို့ လူတွေ အင်အားတောင့်မယ်ဆိုရင် လုပ်လိုက်မယ်ဗျာ... ကဲ video နဲ့ audio ပိုင်းအတွက် ဘယ်သူတွေ၇ိှသေးလဲ... :101: အားပါးတရဆွေးနွေးဖို့ပေါ့... :67:
i only mean to add every pages. ဆိုလိုချင်တာက ရောက်ရာစာမျက်နှာကနေ အလွယ်တကူထွက်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားစေချင်လို့ပါ.... :39:
လူတစ်ကိုယ်လုံး အကြံတွေနဲ့ချည်းပဲဆိုတော့ ( ကောင်းတဲ့အကြံတော့ နည်းပါတယ်... ) အကြံထပ်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ.....
General forum မှာ အမေးကဏ္ဍလေးထည့်ပေးဦးလေဗျာ... မေးရမှာကို လန့်နေလို့... :106: ...
General အောက်က other မှာမေးလို့ရပါတယ်..
HTML/CSS topic အောက်က ကိုစေတန်ညွှန်းထားတဲ့ ဒီ link http://www.mysteryzillion.com/forum/showthread.php?t=100 လေး ဖွင့်တာမရလို့ပါ ။ ကျွန်တော့် ဘက်က browser ကြောင့်လား link ဘဲအလုပ်မလုပ်တာလား တော့ မသိတော့ပါ ။ နောက်လူတွေဖွင့်ရင် မခက်ရအောင် လာပြောတာပါ :1:
http://www.mysteryzillion.com/forums/showthread.php?t=7 အဲဒါကို ပြောတာလားမသိဘူး...
http://www.mysteryzillion.com/forum/...read.php?t=100) ဆိုတဲ့ လင့်